TEOLOJIA LOTERANA - Moa ivelomantsika tokoa ve ny fahasoavan’Andriamanitra ?
Moa ivelomantsika tokoa ve ny fahasoavan’Andriamanitra ?
FILEOVANA FAHAMARINANA 67 HA
FITANDREMANA TOBY FANANTENANA 67 HA
Tsy fantatsika tamin’ny herintsika na ny asantsika ny fahasoavana natolotr’i Jesosy ho antsika fa vokatry ny fanambarana sy ny asa nataon’Andriamanitra irery izany. Eto dia ny anjely no nilaza izany tamin’i Josefa. Ao amin’ny Lio.1 :35 dia ambola ny anjely koa no milaza izao fahaterahana izao sy ny anaran’ny zaza tamin’i Maria. Tsy teto ihany fa taloha sy tao aorian’izao fanambarana ataon’ny anjely izao ary ambandrak' ankehitriny dia mbola miteny sy manao fanambarana ary miasa Andriamanitra mba ho voatolotra antsika ny fahasoavany. Raha tsorina dia ny famelana ny helontsika izany ? Ny Tenin’Andriamanitra voatory ka monina ao am-pontsika no andraisana ny famelan-keloka. Izany no fahatanterahan’ny hoe amintsika Andriamanitra. Betsaka anefa ny mpihaino manadino ka ametrahana ny fanontaniana hoe : Moa ivelomantsika tokoa ny fahasoavan’Andriamanitra ?
Fahasoavana voatolotra ho antsika koa ny Fanasan’ny Tompo izay nampiraisana antsika amin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny fihinana ny tenan’i Kristy sy ny fisotroana ny rany. Hoy indrindra Paoly raha milaza izany : « Ny kapoaky ny fisaorana izay isaorantsika, tsy firaisana amin’ny ran’i Kristy va izany ? Ny mofo izay vakiantsika, tsy firaisana amin’ny tenan’i Kristy va izany ? » I Kor.10 :16. Amin’izany dia amintsika tokoa Andriamanitra ka voavela ny helontsika rehetra. Indrisy anefa fa marobe ireo tsy mampisy vidiny izany fahasoavana lehibe izany ka tsy mandray anjara amin'ny Fanasan'ny Tompo na mandray ny Fanasan'ny Tompo ihany fa tsy matoky ny Teny famelan-keloka ka dia tamana amin'ny fahotana hatrany. Ny hanafaka antsika amin'izany no anton'izao Noely izao. Aoka ary isika hatoky ny Tenin'Andriamanitra ho antsika ka ananantsika ny tena fahasoavana isan'andro.
Ry havana, voatolotra ho antsika ny fahasoavana. Azontsika ny famelan-keloka noho izao fahaterahan’i Jesosy izao. Ny hanafaka antsika amin’ny fahotana no nahatongavany ary izany no hevitry ny Anarany. Hazony mafy ny fahasoavana voatolotra antsika ka aza mety hampisalasalaina intsony. Izao Krismasy izao hampitombo ny fahavelomantsika ao amin’ny fahasoavan’Andriamanitra. Mahatoky ny Tompo Jesosy izay Mpamonjy antsika. Koa aoka hatoky ny fahasoavana voatolotra ao amin'ny Teny sy ny Sakramenta isika. Amen.